चर्चित गायिका बिष्णु माझी दर्शक सामु नदेखिनुको मु’ख्य का’रण य’स्तो रहेछ (हेर्नुस् भिडियो) – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा ……. चर्चित गायिका बिष्णु माझी दर्शक सामु नदेखिनुको मु’ख्य का’रण य’स्तो रहेछ (हेर्नुस् भिडियो) – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा …….
विष्णु माझीको जन्म चापाकोट, स्याङ्जा जिल्लामा भएको थियोे । उनी हाल नेपालको चर्चित तथा उत्कृष्ट लोक गायिकाहरू मध्ये एक हुन् साथै उनी नेपालमै सबै भन्दा बढि पारीश्रमिक लिएर गीत गाउने महँगी गायिका हुन । उनी नेपाली संगीत जगतमा बिगत १५ /१७ वर्ष देखि सक्रिय छिन । नेपाली संगीत जगतमा उनको नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा ठुलो योगदान छ । उनी एक कामप्रति जिम्मेवार राख्ने नेपाली लोक दोहोरी गायिका हुन् ।
विष्णु माझीको हालसम्म एउटामात्र तस्बिर सार्वजनिक भएको छ । जताततै त्यही एउटै तस्बिर प्रयोग भैरहेको छ । उनका समर्थकले उनको फोटो खोजे भने त्यही एउटा तस्बिर मात्र फेला पार्न सक्छन् ।
विष्णु माझीले नेपाली लोक दोहोरी क्षेत्रमा निकै ठूलो योगदान पुराएकि छिन् विशेष गरी लोक गित गाउने माझीले केही सुगम संगित वा गितमा पनि स्वर दिएकि छिन् । विष्णु माझी नेपाली लोक दोहोरी क्षेत्रकि सबैभन्दा महंगो गायिका हुन् तर उनी बाहिरी कुराहरूबाट गुमनाम छिन् । उनले एउटा लोकगीतमा स्वर दिएबापत जति पारिश्रमिक लिन्छिन् त्यो अहिलेसम्म कसैले लिएका छैनन् ।
पछील्लो समयका चर्चित गायक तथा सर्जक हुन गणेश अधिकारी उनका दर्जनौ लोक दोहोरी गीत हरु चर्चामा छन । ति मध्धे धेरै जसो गीत बिष्णु माझी सँग पनि गाएका छन । गुल्मी मा जन्मिएका अधिकारी छोटो समयमै आफ्नो बेग्लै पहिचान बनाउन सफल गायक एबेम सर्जक हुन उनै सँगको कुराकानी मा बिष्णु माझि सङ्ग धेरै गीत गाउनु भयो दर्सक हरुले बिष्णु माझीको बारेमा धेरै प्रश्न गर्छन् तपाईं गीत गाउदा केके कुर गर्नुभयो भनेर सोधेका थियौ जबाफमा यस्तो भनेका छन ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको December 17, 2020 December 17, 2020 279 Viewed